Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | SActivator.com
sactivator.com waxaan aqoonsannahay in asturnaanta macluumaadkaaga shakhsiyeed waa muhiim. Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan noocyada macluumaadka shakhsiga ah aan helno iyo ururiyaan marka aad isticmaasho 'sactivator.com'Iyo sida aan u ilaaliyo macluumaadka.
Waxaan marnaba iibin macluumaadkaaga shakhsiyeed in labada dhinac saddexaad.
Waxaan u isticmaali shirkadaha advertising dhinac saddexaad si ay ugu adeegaan xayeysiis marka aad booqato website-kayaga. xayeysiis ayaa ku jiri kara cookies oo loo isticmaali karaa by shirkadaha advertising in ay si fiican u fahmaan kala doorashada booqdaha ah oo caawiyaan in ay muujiyaan xayeysiis ah la xiriira. Si kastaba ha ahaatee, cookies aqbaleen iyagoo xayeysiis ah la ururiyey by shirkadda advertising iyo annagu ma ay heli karaan macluumaadka. Shirkadahani waxay isticmaali karaan maclumaadka (ma ku jiraan magacaaga, cinwaanka, cinwaanka emailka, ama lambarka taleefanka) oo ku saabsan booqasho aad u this iyo website-yada kale si loo siiyo xayeysiis ku saabsan alaabta iyo adeegyada adiga dan kuu yihiin.
Waxaan u isticmaali shirkadaha advertising dhinac saddexaad si ay ugu adeegaan xayeysiis marka aad booqato website-kayaga. Shirkadahani waxay isticmaali karaan maclumaadka (ma ku jiraan magacaaga, cinwaanka, ama cinwaanka email) oo ku saabsan booqasho aad u this iyo website-yada kale si loo siiyo xayeysiis ku saabsan alaabta iyo adeegyada adiga dan kuu yihiin. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka this iyo jeclaan lahaa in ay ogaadaan fursadaha aad ee la xiriirta·anigoo aan lahayn macluumaadkan isticmaalaan shirkadaha.
Watch Video ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah